ခရမ်းချဉ်သီး နဲ့ အသားအရေ ကျန်းမာရေး - Hello Sayarwon
ဟင်းပဲချက်ချက်၊ သုပ်ပဲစားစား၊ ဆော့စ်ပဲ ဖျော်ဖျော် အရသာရှိသလို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး အစိမ်းအတိုင်းစားရင်လည်း အရသာရှိတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးက ကျန်းမာရေးအတွက် အာနိသင်များသလို အသားအရေကိုလည်း ကျန်းမာစေပါတယ်။ ဒီတော့ အရောင်နီနီရဲရဲလေးနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးလေးက အသားအရေကို ဘယ်လို ထောက်ပံ့ပေးသလဲဆိုတာကို ​ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
ခရမ်းချဉ်သီးမှာ ဘာဓာတ်တွေပါလဲ …………
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တယ်လို့ အများက သိထားတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးမှာ
မဂ္ဂနီဆီယမ် တို့ ပါဝင်နေပါတယ်။
အသားအရေအတွက် ခရမ်းချဉ်သီးက ဘယ်လို ထောက်ကူပေးသလဲ………
အရောင်အသွေး လှပြီး အရသာရှိတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးလေးက
အရေပြားကင်ဆာ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးတယ်
နေရောင်နဲ့ ထိတွေ့မှုများတာက အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေများစေပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ နေရောင်မှာပါတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့်ပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးမှာပါတဲ့ lycopene လို့ခေါ်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းက ကင်ဆာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိနေပါတယ်။
အရေပြားကင်ဆာကို ကာကွယ်ချင်တယ်ဆိုရင် ခရမ်းချဉ်သီးကို ပုံမှန် စားသုံးပေးတာက အဆင်ပြေစေမှာပါ။
အရေပြားအတွက် နေလောင်ကာခရင်မ် မသုံးချင်ဘူးဆိုရင် ခရမ်းချဉ်သီးကို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့် နေလောင်တာကို သက်သာစေနိုင်တဲ့ အာနိသင်ဖြစ်တဲ့ lycopene ပါဝင်နေမှုက အသားအရေကို နေလောင်ဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးပြီး နေလောင်ခဲ့ရင်လည်း မြန်မြန်သက်သာစေဖို့ အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။
နေလောင်တာ သက်သာစေဖို့အတွက် ခရမ်းချဉ်သီးကို စားပေးလို့ရသလို နေလောင်တဲ့နေရာကို ခရမ်းချဉ်သီး တိုက်ရိုက်လိမ်းပေးလို့လည်း ရပါတယ်။
ခရမ်းချဉ်သီးမှာ ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေမှုက အရေပြားမှာဖြစ်တဲ့ အနာတွေကို ကျက်စေဖို့ အထောက်အကူပြုပေးနိုင်သလို တွယ်ဆက်တစ်ရှူးတွေကိုလည်း အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ အနာကျက် ဖြစ်စဉ်ကိုလည်း မြန်စေနိုင်ပါတယ်။
အနာကျက်စေဖို့ ခရမ်းချဉ်သီးကို စားပေးလို့ရသလို အနာပေါ်မှာ ခရမ်းချဉ်သီး အရည်ကို လိမ်းပေးလို့လည်း ရပါတယ်။
အရေပြား ရောင်ရမ်းတာကို သက်သာစေတယ်
ခရမ်းချဉ်သီးမှာရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေနိုင်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့
ဗီတာမင် C တို့က အရေပြားကို ကျန်းမာစေပြီး ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝက်ခြံအပါအဝင် ထိခိုက်မှု တစ်ခုခုကြောင့် အရေပြားရောင်ရမ်းတဲ့အခါ ခရမ်းချဉ်သီးကို သုံးပေးလို့ ရပါတယ်။
ကော်လာဂျင် ထွက်ရှိမှုကို မြှင့်တင်ပေးတယ်
ခရမ်းချဉ်သီးမှာ ဗီတာမင် ကြွယ်ဝမှုက ကိုယ်ခံအားကို မြှင့်တင်ပေးသလို အရေပြားကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ကော်လာဂျင်ထွက်ရှိမှုကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ အသားအရေကို တင်းရင်းစေပြီး အရေးအကြောင်း မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အရေပြားပေါ်က ဆဲလ်သေတွေ ဖယ်ရှားဖို့အတွက်လည်း ခရမ်းချဉ်သီးကို အသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးမှာပါတဲ့ အင်ဇိုင်းက ဆဲလ်သေတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
ခရမ်းချဉ်သီးကို ကြိတ်ခြေပြီး ရလာတဲ့အနှစ်ကို အရေပြားပေါ်မှာ လိမ်းလို့ ခြောက်သွားအောင်ထားပြီး ရေအေးအေးနဲ့ ဆေးချလိုက်ရုံပါ။ မျက်နှာ အပါအဝင် တစ်ကိုယ်လုံးက ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်မယ့် သဘာဝ နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။
ခရမ်းချဉ်သီးမှာ အရေပြား ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် B အုပ်စု ပါဝင်နေတာ​ကြောင့် အသက်အရွယ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အရေပြားပြဿနာတွေ ဖြစ်ကြတဲ့
အရေပြားမှာ အစက်အပြောက်တွေ ဖြစ်တာ
အရေးအကြောင်းဖြစ်တာလိုမျိုး ပြဿနာတွေကို ကင်းဝေးစေနိုင်ပါတယ်။
ဓာတ်တိုးပစ္စည်းတွေက ဆဲလ်တွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး အရေးအကြောင်းတွေနဲ့ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်တာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးမှာ အသားအရေကို အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝမှုက ဓာတ်တိုးပစ္စည်းတွေကြောင့် အသားအရေ ထိခိုက်တာမျိုး မဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အကြောပြတ်ရာတွေပေါ်မှာ ခရမ်းချဉ်သီးကို လိမ်းပေးရုံနဲ့ သိသာတဲ့ရလဒ်ကို ရရှိစေမှာပါ။
အရေပြားမှာ အစိုဓာတ် နည်းလာတဲ့အခါ ယားယံတာ၊ ကွဲအက်တာနဲ့ အဖတ်လန်တာမျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာတွေကို ကင်းစေဖို့ဆိုရင် ခရမ်းချဉ်သီးကို အသုံးပြုပေးလို့ ရပါတယ်။
ခရမ်းချဉ်သီးက အရေပြားကို အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးနိုင်ပြီး ပိုတက်ဆီယမ် ပါဝင်တာကြောင့် အရေပြားပြဿနာတွေကို ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေ​ခြောက်သွေ့နေရင်ဖြစ်ဖြစ် အရေပြားကို အစိုဓာတ်ပြည့်ဝစေချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ခရမ်းချဉ်သီး လိမ်းပေးလို့ရပါတယ်။
ဒါတွေအပြင် ချွေးပေါက်တွေ ကျဉ်းစေဖို့၊ အသားအရေကြည်လင်စေဖို့နဲ့ ဆားဝက်ခြံတွေ သက်သာစေဖို့အတွက်လည်း ခရမ်းချဉ်သီးကို အသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ်။ အသားအရေလေး ကြည်လင်ပြီး အနာအဆာ ကင်းစေဖို့ ခရမ်းချဉ်သီးလေးရဲ့ အကူအညီရယူလိုက်စို့နော်………….
Can You Use Tomatoes for Skin Care? https://www.healthline.com/health/tomato-benefits-for-skin Accessed Date4May 2020
Tomatoes For Skin Care: Here’s How You Can Use Tomatoes For Soft And Supple Skin https://food.ndtv.com/beauty/tomatoes-for-skin-care-heres-how-you-can-use-tomatoes-for-soft-and-supple-skin-1844984 Accessed Date4May 2020
The Beauty Secrets of Tomato http://www.tat.com.tr/en/healthy-red/the-beauty-secrets-of-tomato Accessed Date4May 2020